Indlela yokwenza i-Gmail isebenze ngokwezifiso izixhobo ezizezona zilungileyo. Emulator.online ▷ 🥇
I-Gmail yeyabasebenzisi abaninzi uphawu lokufumana nokuthumela ii-imeyile kodwa, kule minyaka idlulileyo, ihlaziye kakhulu iigraphics zayo ukuze idibanise iinkonzo ezingakumbi zeGoogle, ngokukhawuleza ibe yindawo yokwenyani yeqonga likaGoogle. . I-interface iye yabanzima kakhulu kwaye iyanzima ukuyisebenzisa kubasebenzisi abaninzi be-novice, abazifumana benolwazi oluninzi kunye neenkonzo ezingenamsebenzi kwiscreen.
Ukuba ucinga ukuba ujongano lweGmail luyinkimbinkimbi kwaye lubanzi, uze kwisikhokelo esifanelekileyo-siza kukubonisa apha Indlela yokwenza i-Gmail ngokwezifiso kunye nezixhobo ezilungileyo, ukuze ube nenkonzo ye-imeyile emsulwa, ngaphandle kwemizobo emininzi kunye neenkonzo ezongezelelweyo kwibar esecaleni. Ekupheleni kokufunda siya kuba nakho ukulawula i-Gmail ngendlela elula nekhawulezileyo, ngokukhawuleza sifunde ii-imeyile zethu kwi-PC kwaye siphendule ngokukhawuleza kuyo yonke imiyalezo efunyenwe okwangoku.
OKUFUNDILEYO FUNDA: Izandiso zokuphucula i-Gmail kwiChannel nakwiFirefox
Indlela yokwenza ngokwezifiso i-Gmail
Ukwenza ngokwezifiso i-Gmail kulula kakhulu, kuba inkonzo ye-imeyile kaGoogle ibonelela ngazo zonke izixhobo zokwenza ujongano lomzobo wobuntu bendawo. Izicwangciso ezininzi zifihliwe kwaye ke kunzima ukuzibonaKodwa ngokufunda ngononophelo imigca ecetyiswe ngezantsi, siya kuba nakho ukwenza ngokwezifiso i-Gmail ukuyenza ukuba ikhawuleze ukusetyenziswa, ngakumbi kwindawo yokusebenza.
Cima uMhlangano kunye neeHangouts
Iinkonzo zokuqala ezongezelelweyo esinokuzisusa kwangoko kwibar esecaleni kukuhlangana kunye neeHangouts, ngakumbi ukuba asizimiselanga kuzisebenzisa. Ukuqhubeka, masiye kwiwebhusayithi yeGmail, ngena ngeakhawunti yethu kaGoogle, ucofe i icon yegiya ngasekunene, ucofe Bona zonke iisetingi kwaye ekugqibeleni uye ekhadini Ingxoxo kunye neentlanganiso.
Kwiphepha eliza kuvela sisebenzisa uphawu lokutshekisha kwi I-Hangouts ikhubazekile mi Fihla icandelo leNtlanganiso kwimenyu ephambili, emva koko siyacinezela Gcina utshintsho. Ngoku, ekugqibeleni, i-Gmail iya kukhathalela i-imeyile kuphela, ngaphandle kwezinye iinkonzo zesibini zikaGoogle ezingasetyenziswanga.
Hlela iithegi kunye neendidi
Olunye ulwenziwo esinokuthi silusebenzise lubonisa iilebheli ezibonakala kwicala lasekhohlo le-Gmail kunye neendidi apho ii-imeyile ziqhotyoshelwe khona; ayizizo zonke izinto ezikhankanyiweyo eziluncedo kwaye ngamanye amaxesha zide ziphinde zifuneke. Ukulawula iithegi kunye neendidi, masibuyele kwimenyu Bona zonke iisetingi (Njengoko kubonwe kwisahluko esingaphambili) kwaye uvule isithuba Iilebula.
Ukusuka kwesi sikrini sinokuphelisa izinto esingazixabisiyo ngokunqakraza kwinto leyo fihla; ukuba endaweni yoko sifuna ukuba into ethile ibonakale, sinokukhetha into ukuchayeka Zombini ziyazikhethela ilizwi bonisa ukuba ayifundwanga (kuphela iithegi ezithile), ukuze kuphela iithegi esizifunayo zinqakraze kube kanye. Iilebhile azizukunyamalala ngokupheleleyo, ziya kufihlwa kuphela: ukuzibona ngokucinezela Imenyu engaphezulu kwicala lasekhohlo.
Ukuba, kwelinye icala, sifuna ukwenza ngokwezifiso iindidi ezivela kwiphepha lasekhaya le-Gmail (ecaleni kwecandelo Nqununu, engenakucinywa), vula nje i-inbox tab kwimenyu Bona zonke iisetingi.
Singacima yonke into (kwaye sifunde ii-imeyile kuphela kudidi Nqununu) okanye ushiye kuphela udidi olunye okanye ezimbini, ukuze yonke into ibe phantsi kolawulo kwaye kuthintelwe ukusasaza umxholo we-imeyile. Ukuba sifuna ukwenza iilebheli ezintsha zesiko kwaye sizibonise kwibar esecaleni, konke ekufuneka sikwenzile kukwandisa ibar esecaleni (ngokucinezela i-hamburger icon ngasekhohlo), cofa apha Okunye, skrolela kuluhlu kwaye ucofe ekugqibeleni Yenza ithegi entsha. Emva kokwenza iileyibhile, cofa kuLawulo lweelebheli (ezikhoyo kwibar efanayo) kwaye ucofe kuyo ukuchayeka ecaleni kwegama elikhethwe kwithegi entsha, ukuze uhlale unonqakrazo olunye kude.
Cwangcisa umxholo webhokisi yeposi kunye nesitayile kwiGmail
Ukuba siyakuthanda ukwenza ngokwezifiso indawo yethu yokusebenza, i-Gmail inokulungiswa ngemixholo esekwe kwangaphambili kunye nezitayile ezahlukeneyo, ukuze ibe sisixhobo esihle nesisebenziseka ngokulula kunqakrazo olumbalwa. Ukutshintsha umxholo kunye nesimbo sebhokisi, konke ekufuneka sikwenzile kukucofa i icon yegiya ekunene ephezulu kwaye uskrole ngefestile elahlekileyo, ukuze ukhethe ngokukhawuleza uyilo lwegraphic.
Ngenye indlela singasa kwimenyu. Bona zonke iisetingi, vula isithuba Izihloko kwaye uqhubeke Seta umxholo, ke unokukhetha imizobo esifuna ukuyifaka.
Faka iiplagi ezintsha
Kwicala lasekunene lewebhusayithi yeGmail sifumana ibar encinci, apho kukho izongezo zikaGoogle ezinokudityaniswa nenkonzo yeposi. Siza kufumana Ikhalenda kaGoogle, Gcina mi Tareas, kodwa ngokucinezela i-icon singongeza enye yeeplagi ezininzi ezihambelana neGmail.
Njengoko ubona kumfanekiso ongentla, sinokufumana iplagi yokudibanisa i-Zoom kunye nezinye iinkonzo zenkomfa yevidiyo, kodwa kunye nokwandiswa kwelifu, ulwandiso lwemisebenzi ekude kunye nabaphathi bamanqaku nokunye okuninzi.
I-Gmail ibonakala ngathi ye-spartan kwaye ayinakwenziwa ngokwezifiso-njengoko kubonisiwe kakhulu kwizahluko ezidlulileyo, sinokutshintsha ngokwenyani yonke imiba yomdibaniso kwaye silawule iilebheli kunye neendidi ezithunyelwe nge-imeyile, kunye nokukhubaza amanqaku amancinci. Hangouts.
Ukuba sifuna ukwenza amacebo okuzenzekelayo ngokusekwe kwiilebhile ezizezakho, siyakumema ukuba ufunde eyethu Gqibezela isikhokelo seGmail ukuze uqalise kwaye ube yiNgcali yemeyile kaGoogle.
Ukuba, kwelinye icala, sifuna ukulawula ngcono izaziso zesicelo seGmail kwi-Android, sicebisa inqaku lethu Lawula izaziso zeGmail kwi-Android. Sintsha kwinkonzo ye-Gmail? Ke masingalahlekelwa luhlalutyo olunzulu Iimpawu eziGqwesileyo zeGmail, ngoko ungasebenzisa i-Gmail kwangoko njengengcali.
Uyijika njani imibhalo engezantsi kwiTV
Uyibiza njani ifowuni yakho ngaphandle kwetshaja
Ungawumamela njani umculo kwiwotshi efanelekileyo (i-Android, iApple kunye nezinye)
Uyibeka njani iTV kwimowudi yokulinda
Ukuvelisa umculo omtsha ngobukrelekrele bokuzenzela
Ezona zilungileyo zomsebenzi wesilayidi ze-Android kunye ne-iPhone
Iimpawu eziPhambili ze-Android ezili-11 -Uzifumana njani kuyo nayiphi na ifowuni
Ngowuphi umsebenzisi ophethe i-Intanethi okhawulezayo kwi-4G LTE?
Indlela yokuseta isikhangeli esingagqibekanga kwi-iPhone
Uyibukela njani iMidlalo yeMedia kwiTV
Indlela yokukhuphela iifoto kwiifoto zikaGoogle
Indlela yokwenza imali nge-Instagram